अनलाइन स्क्यामको कारण ४ हजार पाउण्ड गुम्यो | Kendrabindu Nepal Online News
४ कार्तिक २०७६, सोमबार १५:४६
एजेन्सी । साइबर अपराधका समाचारहरु दिन दिनै आइरहेका छन् । संंसारकै सबै भन्दा विकशित देशहरुमा पनि साइबर अपराले जरा गाडेर बसेको छ ।
साइबर अपराध विभिन्न किसिमका हुन्छ । त्यसमा पनि अनलाइन स्क्याम सबै भन्दा धेरै हुने र सबै भन्दा खतरनाक मानिन्छ । हालै बेलायतमा एउटा यस्तो खतरनाक अनलाइन स्क्याम भयो जस्को कारण एक व्यक्तिले चार हजार पाउण्ड अर्थात पाँच लाख ९० हजार नेपाली रुपैयाँ गुमाउन पुगेका छन् ।
डग भेरी नामक ब्यक्तिले एउटा पप–अप विज्ञापनमा क्लिक गर्दा यस्तो समस्या आइलागेको हो । उक्त विज्ञापनमा ५५६ पाउण्डमा १२ वर्षको लागि कम्प्युटर सेक्युरेटी प्रोटेकसनको योजना दिएको थियो । उक्त विज्ञापनमा क्लिक गर्दा उनले चार हजार पाउण्ड गुम्न पुगेको हो ।
विज्ञापन हेर्दा विश्वासनीय भएकाले बिना कुनै शंका क्लिक गरेको उनको भनाई छ । एउटा सानो गल्तीले उनी कम्प्युटर सफ्टवेयर सर्भिस फ्रडको शिकार भए ।
घटनापछि भारतीय प्रहरीले २ वटा कल सेन्टर बन्द गराएको छ । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । लण्डन पुलिसका अनुसार यस्तो प्रकारको घटना निकै बढी घट्ने गरेका छन् । यस्तो प्रविधिको घटना वर्षमा दुई हजार भन्दा बढी घट्ने गरेका छन् ।
कलकत्त प्रहरीको साइबर डिभिजनले दुई वटा कल सेन्टरमा छापा मार्दै अनुशन्धान अगाडि बढाएको थियो । उनीहरुले बेलायत र अमेरिकामा ठूलो मात्रामा अनलाइन स्क्याम गर्ने योजना बनाएका थिए ।
घटना भएको केहि महिनापछि मात्र उनले आफु ठगिएको थाहा पाएका थिए । सेक्युरिटी फर्मबाट आएको फोनका आधारमा उनी आफु ठगिएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
उनलाई आफुले न्यूयोर्कमा रहेको कम्पनीलाई पैसा तिरिरहेको जस्तो लागेको थियो । तर वास्तवमा उनले त्यो रकम भिजन कल सर्भिस नामको संस्थामा बुझाएका थिए । जुन भारतको कलकत्तामा थियो । यो बारे उनी अनविज्ञ थिए । यस्तो खालका घटनाबाट बच्न प्रहरीले केहि सुझावहरु दिएका छन् ।
१. आएको कललाई राम्रोसँग जाँच गर्नुहोस्, यस्तो स्क्याम गर्नेहरु प्राय आफु माइक्रोसफ्टको अधिकारी भनेर चिनाउँछन् । कतिपयले आफु तपाईंहरुको टेलिफोन र इन्टरनेट प्रदायक हुन भनेर समेत दाबी गर्छन ।
२. वैधानिक संस्थाहरुले तपाईलाई विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त गरेका नम्बरमार्फत पुनः सम्पर्क गर्न प्रोत्साहन गर्दछ ।
३. तपाईको मोबाइलको डिस्पलेमा देखिएको नम्बर पुर्ण रुपले विश्वासनीय हुन्छ भन्ने छैन । विभिन्न प्रविधिहरु प्रयोग गरेर स्क्यामरहरुले विदेशी र कुनै विश्वसनीय नम्बर उपयोग गर्ने गरेका छन् ।
४. तपाईको कम्प्युटरमा समस्या छ, यस नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला भनेर म्यासेज आउँन सक्छ । त्यस खालको नम्बरमा कल गर्दा अनलाइन स्क्यामको सिकार हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।
online scammer, साइबर अपराध
Prevमारुती सिमेन्टले ल्यायो ‘चाँदीको झिलिमिली’ योजना
दुर्गेश थापाविरुद्ध उजुरी, स्वीकारे गल्तीNext